Kwayakabva Mundo rwizi, inoyevedza yechisikigo chiitiko | Kufamba Nhau
Kunobva rwizi Mundo
Kwayakabva Mundo rwizi ndechimwe chezvakanaka kwazvo zvakasikwa zviitiko mudunhu re Albacete. Ukazvitarisa, unogona kufunga kuti uri murwizi rwe Hawaii. Nekudaro, iwe uri mu Alcaraz makomo emakomo, imwe yeaya anoumba iyo Prebetic gomo renzvimbo.
Rwizi Mundo rwizi rwe Segura, iyo inobatana nayo mushure mekugamuchira, zvakare, nzizi Bogarra and of the Vega de Riópar. Asi kutanga, zvinotora rwendo rwunoyambuka mataundi akati wandei, rimwe nerimwe riine runako uye nhoroondo. Nekudaro, isu hatisi kuzotarisira. Ngatitangei nekwakabva rwizi Mundo.
1 Kuberekwa kwerwizi rweMundo, chiitiko chakasiyana
1.1 Nguva yekuenda uye sei kusvika ikoko
1.2 Iyo nzira yekukwira sosi yekwaiye Mundo rwizi
2 Iyo nzira yeMundo rwizi
Kuberekwa kwerwizi rweMundo, chiitiko chakasiyana
Sezvo isu tanga tichitaura, rwizi Mundo rwunoberekerwa mugomo reAlcaraz. Kunyanya, inobuda kunze kubva mubako rakadzika kwazvo. Ivo vanozivikanwa kubva makiromita makumi matatu nemaviri aya. Nekudaro, iyo mhango iri pamusoro pechikomo chemakarst-mhando chikomo.
Iyi kirasi yematombo ine nzvimbo dzinopinza idzo dzinopfuura nemvura. Saka, iyo Mundo rwizi jeti Inowira muchimiro chemvura paunenge uchigadzira lagoni. Kubva pane izvi, inokura kuyerera kwayo. Chiono chekubuda kwemvura uye kudzika kwayo pakati pemiriwo chiitiko chakasarudzika.
Nguva yekuenda uye sei kusvika ikoko
Iyo yakanakisa nguva yekuti iwe uone kunobva Rwizi rweMundo mukubwinya kwaro kwese ndeye primavera. Ipapo jeti remvura rinobuda nesimba rinoshamisa mune chiitiko chinonyanya kuzivikanwa se "kuputika."
Kuti usvike kunzvimbo inozvarirwa rwizi, unofanirwa kushandisa mota. Kubva Riopar, unofanirwa kutora mugwagwa urikuenda Siles. Anenge makiromita matanhatu gare gare iwe unowana iko kutsauka kunoenda kunobva. Uchasvika izvi mushure mekufamba mamwe makiromita maviri. Usatombo kunetseka nezvekupaka nekuti iwe unayo kupaka nekwanisi yemotokari zana nemabhazi matanhatu. Asi, mushure mekuona sosi, iwe uchiri nezvakawanda zvekushanyira munzira yeRwizi Mundo.
Iyo nzira yekukwira sosi yekwaiye Mundo rwizi
Chinhu chekutanga chatinoda kukurudzira ndechekuti iwe uite ino yakanaka nzira yekukwira nzira. Chikamu chenzvimbo imwechete inozvarwa rwizi uye chine hurefu hwemakiromita manomwe. Zvisinei, nzira yacho haisi nyore nekuti inofamba nemumakomo anosvika pamamita chiuru nemazana matatu uye ine kumwe ngozi.
Nekudaro, kana iwe ukafunga kuzviita, iwe unozoshamiswa neiyo nzvimbo iyo yaanokupa iwe. Muchokwadi, inomhanya kuburikidza ne Calares del Mundo uye La Sima Natural Park. Pamusoro pezvo, nzira yacho inosvika pamuromo webako panobuda rwizi Mundo. Kuti uite izvi, iwe uchazoda mvumo yakasarudzika iyo zvakare ichakubvumidza iwe kuti upinde mairi kwemamita zana nemakumi mashanu pasina kudikanwa kwekuchengetedza michina. Asi usamboedza kuenda kumberi. Izvi zvinongokodzera chete vevashandi vemubatanidzwa.
Chero zvazvingaitika, nzira yacho inokosha. Uchaona nzvimbo dzakaita sedzake Calar del Mundo, rwenze rwune zvinyowani zvinodzika zvinopinda mvura mukati mebako. Gare gare, gomba iri richaridzinga, zvichipa kunobva iko kunobva rwizi Mundo. Uchaonawo magora, makondo nemamwe marudzi munzvimbo iyi.
Iyo nzira yeMundo rwizi
Kwete chete kunobva rwizi Mundo rakanaka. Zvakakoshawo kuti uenderere mberi nerwendo rwayo kusvikira rwunoperera paSegura. Rwendo urwu runopfuura maguta akanaka kwazvo yatinenge tichizotaura newe zvinotevera.
Iri taundi diki rinochengeta iro rekare renyika rakakura mudunhu rese. Mariri, tinokurudzira kuti ushanyire zvakasara zve castle-fortress Nguva yeMuslim uye iyo chechi yemweya mutsvene, Yakavakwa muzana regumi neshanu ramakore, asi rakadzoreredzwa zvizere uye ine maGoth mafresco.
Zvakare, iwe unogona kuona muRiópar iyo Museum yeRoyal Mafekisheni eSan Juan de Alcaraz. Icho chipupuriro chipenyu chemafekitori endarira neendarira ayo aigara dhorobha pakati pezana ramakumi masere nemasere nemakumi maviri uye zvakagadzirwa nekuraira kwamambo. Carlos III.
Inowanikwa mumasipala we Molinicos, nzvimbo iyi yaizivikanwa chaizvo seRíomundo. Inowanikwa mune yakasarudzika yakasarudzika zvisikwa, iine yakawanda yemipini uye howa. Uye zvakare, zvichave zvinofadza kwazvo kufamba munzira dzayo dzakasarudzika uye kuona yayo yekuwachira yekare.
Zvimwe zvine chekuita nedunhu reIsso, taundi diki riri kumahombekombe eruboshwe erwizi rweMundo. Mariri, unogona kushanyira iyo kereke yeSantiago Apóstol, Yakavakwa muzana ramakore gumi nemasere uye inogara mufananidzo wevachengeti veIsso, uye Almohad shongwe yeXIII yaive nenhare nhasi yanyangarika.
Asi, pamusoro pezvose, tinokukurudzira kuti uone izvo zvakasiyana puentes vanoyambuka rwizi. Ivo vakagara vachionekwa sevaRoma, zvisinei ivo vari gare gare. Asi, chero zvakadaro, iwo chikamu chenzvimbo yerunako rukuru.
Zvakare inonzi «Iyo Serrana Jewel», iri guta inzvimbo yekufambira kune vanoda mafirimu 'Kubuda kwezuva, icho chisiri chinhu chidiki', sezvo yakapfurwa murutivi mumigwagwa yayo. Asi zvakare ine mamwe mapoinzi ekufarira, kutanga nemigwagwa yayo yakatetepa uye ine cobbled.
Unogona kushanyira iyo Parishi Chechi yeKukwidzwa, yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX. Mukati, iwe unogona zvakare kuona inoyevedza baroque nhengo yeXVII. Iwe unogona zvakare kuenda pasi pe Arco de la Mora, Iyo ine yayo ngano pamusoro pehuroyi; shanyira mugero uye hydraulic zvigayo uye uswedere padhuze ne Híjar maonero, iyo inokupa iwe unoyevedza maonero emakomo eAlbacete.
Chekupedzisira, isu tichakuudza nezve rino dhorobha raivewo chiitiko chemufirimu wataurwa pamusoro. Uye zvakare, iwe unogona kuona mairi iyo kereke yeSantiago Apóstol, inova Saiti yeCultural Inofarira uye inogara dzimba dzakanaka dzeEspino; iyo Hermitage yeMukadzi wedu weBheterehema, ine yakanaka polychrome altarpiece, uye iyo Convent uye Chechi yevakadzingwa maKarimeri, yakavakwa pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX.
Mukupedzisa, iyo kunobva rwizi Mundo, in Castilla la Mancha, inokupa iwe chiitiko chechisikigo cherunako rukuru. Asi zvakatipoteredza zvakakoshawo kushanya kwako kune rakapfuma rakakura nhaka uye rakakura kukosha kwaro. Haudi here kuziva nzvimbo yacho?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways » Kunobva rwizi Mundo